आज कहाँ-कहाँ हुन्छ भारी वर्षा ? पहाडी भेगमा हिमपातको सम्भावना « Mero LifeStyle
आज कहाँ-कहाँ हुन्छ भारी वर्षा ? पहाडी भेगमा हिमपातको सम्भावना
देशभर आज पनि निरन्तर वर्षा हुने भएको छ । पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपातको पनि सम्भावना रहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकाअनुसार देशका अधिकांश भू-भागमा सामान्य बदलीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । प्रदेश नम्बर १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारी वर्षा भइरहेको छ ।
बाग्मतीको मुख्यमन्त्रीमा पाण्डे नियुक्त, यस्तो छ राजनीतिक पृष्ठभूमि « Mero LifeStyle
संकटमा कर्णालीका परम्परागत रैथाने बाली : उत्पादन घट्दो, माग बढ्दो « Mero LifeStyle
बाढीपहिरो अपडेटः मृत्यु हुनेको संख्या ३१ पुग्यो, ४३ सम्पर्कविहीन « Mero LifeStyle
‘जाग्राम बसेर बचाएको धानबालीलाई वर्षाबाट जोगाउन सकिएन’ « Mero LifeStyle
बैतडीको ढुंगाडका ६० व्यक्ति टापुमा फसे, दुई सय बिगाह जमीन डुबानमा « Mero LifeStyle